Saraakiil ka socotay Dowladda Talyaaniga oo Muqdisho yimid – Radio Daljir
Saraakiil ka socotay Dowladda Talyaaniga oo Muqdisho yimid
Diseembar 23, 2015 9:57 b 0
Somalia, December 23, 2015-(Daljir)_ Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini oo weheliyo Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya S/Gaas Maxamed Aaden Axmed, taliyeyaasha Ciidamadda Cirka iyo Badda, ayaa maanta Muqdisho ku qaabilay Abbandulaha Guud ee Ciidamadda Gaashaandhigga Talyaaniga Sareeye Guud Claudio Graziano oo booqasho hal cisho ah ku yimid magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Kulamada Wasaaradda Gaashaandhigga uu la qaatay Taliyuhu kahor , R/Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo R/Wasaare ku xigeen Mudane Maxamed Cumar Carte ayay kulan sharafeed la qaateen, wuxuna sheegay Ra’iisul Wasaaruhu in Soomaaliya ay ka filaneyso dowladda Talyaaniga kaalin balaaran oo wax ku ool u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, oo kulan albaabadu u xiran yihiin la qaatay Wafdiga ayaa xusay in booqashadani ay sii xoojin doonto taageerada dawladda Talyaanigu ay siiso Ciidamadda Xoogga dalka Soomaaliyeed. Kulankani ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xiriirka laba geesoodka , kobcinta iskaashiga labada dal u dhaxeeya , taageeridda Ciidamadda Xoogga dalka, la dagaalanka argagaxisada iyo qodobo kale.
“Maanta waxaa nagu soo booqday magaalada Muqdisho Abbandulaha Guud ee Ciidamadda Gaashaandhigga Talyaaniga Sareeye Guud Claudio Graziano oo booqasho hal cisho ah noogu yimid. Waxaa dalka Talyaaniga nagala dhexeeya iskaashi iyo xiriir qoto dheer. Waxaan uga mahad celinayaa sida wanaagsan oo ay mar walba noogu garab taagan yihiin dadaalka aan ugu jirno xasilinta iyo nabadeeynta Soomaliya. Waxaan sidoo kale uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay uga qeyb qaateen dhismaha ciidanka Xoogga dalka. Waxaa lagama maarmaan ah in mar walba uu hadafkeenu ahaado inaan sii xoojinno xiriirka labada dal maadaama aan nahay labo dal oo saaxiib ah oo aan kala maarmin” ayuu yiri Wasiir Diini.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed S/Guuto Maxamed Aaden Axmed, ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee la soo dhaafay guulo laga gaaray dhismaha ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo hadda deegaano badan oo horey kooxaha nabada diidan ugu sugnaayeen ay ka xoreeyeen dibna loogu soo celiyeen noloshii, taas oo ka dhigan in Ciidamaddu ay u heelan yihiin difaaca dalkooda, loona baahan yahay in la siiyo taageero dhamaystiran. Wuxuna mahadcelin u jeediyey dawladda Talyaaniga taageerada ay siiyaan ciidanka Xoogga dalka.
Abbandulaha Guud ee Ciidamadda Gaashaandhigga Talyaaniga Sareeye Guud Claudio Graziano ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu soo booqdo Muqdisho, wuxuuna sheegay in imaashiyihiisa ay ka dambeesay ka dib iskaashi ballaaran oo dhex marey labada dawladood gaar ahaan Wasaaradaha Difaaca ee Talyaaniga iyo Soomaaliya.
Madaxweyne Gaas oo xarig-ga ka jaray Mashaariic laga Hirgaliyay Gaalkacyo
Eng. Camey oo Sheegay in xal laga gaaray muran xuduudda ah oo u dhaxeeyay Puntland iyo Itoobiya